We Fight We Win. -- " More than Media ": ဦးပိုင် နဲ့ စီးပွားရေးသမားများ အလိမ်ခံထိ ( နောက်ဆက်တွဲသတင်း)
ဦးပိုင် နဲ့ စီးပွားရေးသမားများ အလိမ်ခံထိ ( နောက်ဆက်တွဲသတင်း)
စင်္ကပူက မြန်မာ နိင်ငံသာ တရုပ်အမျိုးသားတဦး ရဲ့လိမ်လည်မှုကြောင့် ဦးပိုင်ကုမဏီအပါအ၀င် မြန်မာ နိင်ငံက စီးပွားရေးသမား အတော်များများ အထိနာသွားပါတယ်။ ဒေါ်လာသန်း ၆၀ ခန့်ပါသွားတယ်လို့ သိရတယ်။ စစ်အုပ်နဲ့ နီးစပ်တဲ့စီးပွားရေးသမားတွေ ကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ ထားတဲ့အတွက်
သူရဲ့ဘဏ်အကောင့်ကို သုံးရတယ်လို့ သိရတယ်။ ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး ဒီလူကလိမ်သွားတာလို့ ဆိုတယ်။
သူခိုးလက်က သူဝှက်လု ဆိုပဲ။
There werealong history on some Singapore Chinese people (Singalish Speakers) who CHEATED to Burmese citizens and others since 1970's after running away from Malay peninsular. They sucked in both good & bad ways.Some good things were Investments, Promote education,Health,Intake Professionals... A few cheating were regarding about import/export Tradings,Telecommunications, many Shipping Company on recruiting seamen, stay visa, luring girls to prostitution (especially Thai girls),and so on... At that time neighboring countries love & hate that small (approximate 50+ mile wide)Island. They were called selfish singalish speakers instead of Singaporeans.
They boasted that "Singaporeans cannot die", wondering why?.
7 January 2012 at 16:35
7 January 2012 at 19:41
C R O O K S !!!!!!
The shop name is "SHWE YADANAR", owner is DAW TIN TIN MYINT
the name is lwe hein not shwe ya da nar............the guy name call ko pyae...
the shop name is lwe hein ...not shwe ya danar.....shwe ya danar isafew million only..........